रमाइलो जोक्सहरु पढेर एक छिन रमाइलो गरौ
एउटा आर्मीको पार्टिमा पार्टी सकिए पछि एउटा सैनिक बियर आफ्नो सर्टमा लुकाउदै थियो ।
यो एउटा मेनेजरले देखेछ र रिसाउदै भनेछ : यो तिमी के गर्दै छौ ? बियर सर्ट भित्र किन
सैनिक : सर तपाईं आँफैले नै भन्नु भएको होइन , जसलाई तिमी मार्न सक्दैनौ त्यसलाई बन्दी बनाउनु भनेर ...
राम : सर , मैले हिजो तपाईंको छोरीलाई देखेको थिए
, आज म उनिलाई माया गर्छु र भोली म उसलाई भगाएर लानेछु ।
शिक्षक : राम तिमीलाई किन गणित बिषय राम्रो लाग्दैन ?
राम : किन भने त्यसमा खाली समस्यै समस्या हुन्छ ।
दुई जना पागल कुरा गर्दै थिए
पहिलो : यार म यो संसारको सबै हिरा मोती किन्ने बारे सोची रहेको छु ।
दोश्रो : होइन म तिमीलाई त्यो बेच्दै बेच्दिन कसरी किन्छौ ?
एउटा केटीले आफ्नो दिदी सँग सोधेछन
बहिनी : दिदी यो दुल्हा भनेको के हो ?
दिदी : दुल्हा सँग बिहा गरिन्छ , यदि तिमी ठुलि भएर राम्रो चरित्रकी भयौ भने तिमीलाई पनि एउटा राम्रो दुलहा जुर्नेछ ।
बहिनी : यदि म राम्रो चरित्रकी भईन भने नि ?
दिदी : तिमीलाई हरेक दिन नयाँ नयाँ दुल्हा मिल्नेछ ।
प्रेमिका : के तिमी मलाई साचै प्रेम गर्छौ ?
प्रेमी : हो , साचै म तिमीलाई प्रेम गर्छु , मैले आफ्नो लिस्ट हिजो फेरी चेक गरेको थिए ।
अफिसर : मैले यो सुने कि हिजो तिमीले एकदम मात्तिने गरी रक्सी पिएर सडकमा ठेला गुडाउदै खुब हल्ला मच्चायौ रे , यस्तो चर्तिकलाले हाम्रो पुलिसको के नाम रहन्छ ? तिमीले सोचेको छौ ?
पुलिस : यो त तपाईंलाई म भन्दा धेरै थाहा होला नि , ठेलामा त तपाईं सवार हुनु हुन्थो त ।
माधब नेपाल रक्सीले मातिदै सडकमा हिड्दै थियो , उनी एउटा खुट्टा दाँया र अर्को खुट्टा बाँया गर्दै लड्खडिदै हिड्दै थियो ।
त्यतिकैमा एउटा हवल्दारले देखेछ र नेपाललाई एक डण्डा हिर्काउदै भनेछ : ओई , खुट्टा समेट ठेगानमा छैन , कत्ती पिएको छस ।
नेपाल : धन्यबाद , मलाई सम्झाईदिनु भयो कि मैले पिएको छु भनेर , नत्र मैले त यो सम्झिदै थिए कि लँगडा भए भनेर ।
माधव नेपालको छोरा : उठ्यो र भन्यो , सर तपाईंहरु प्रश्न पत्र कहाँ छाप्दै हुनु हुन्छ ?
लेखक: दिपक भट्टराई बाट 3:59 PM
Anonymous May 25, 2011 at 1:13 PM
Ramro joke rahechha
Anonymous May 25, 2011 at 1:14 PM
so funny joke i am really happy with u thanks
Anonymous May 25, 2011 at 1:15 PM
Dipak ji sarrai ramro joke lekhnu bhayekoma thanks
Nice joke thanksalot